BUDDHIST TERMS' Dictionary: FASTING DAYS - ဥပေါသထဒိဝသ
FASTING DAYS - ဥပေါသထဒိဝသ
FASTING DAYS Uposathadivasa
ဥပေါသထဒိဝသ - ဥပုသ်နေ့၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ ၈-ပါးသီလ ကျင့်သုံးသောနေ့၊ သံဃာတော်များ ဥပုသ်ပြုသောနေ့။
မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာတော်၌ ၈-ပါးသီလ စောင့်ထိန်းရသောနေ့များကို (ဥပေါသထဒိဝသ) ဥပုသ်နေ့များဟု ခေါ်ဆိုသတ်မှတ်ကြသည်။ လဆန်း ၈-ရက်၊ လဆန်း ၁၅-ရက် (လပြည့်နေ့)၊ လဆုတ် ၈-ရက်၊ လဆုတ် ၁၄-ရက် သို့မဟုတ် ၁၅-ရက် (လကွယ်)နေ့များသည် လူပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ဥပုသ်နေ့များဖြစ်ကြသည်။
ရဟန်းတော်များသည် လပြည့်, လကွယ်နေ့များ၌ ပါတိမောက် ရွတ်ဆို၍ ဥပုသ်ပြုကြရသည်။
Uposatha day, the specially assigned days of the month on which lay folks observe the Uposatha (eight) precepts; the days marked for the members of the Order to recite pᾱtimokkha.
In the Teaching of the Buddha, the days for observance of the eight precepts are called uposatha divasa or uposatha days. The eighth and fifteenth days of the waxing half of the lunar month and the eighth and either the fourteenth or the fifteenth days of waning half of the lunar month are the fasting days.
The members of the Order observe uposatha on the fifteenth day of the waxing half of the month, as well as on the new moon days which fall alternately on the fourteenth and the fifteenth of the waning half of the month.